Allgedo.com » Dowlada Holland oo lagu Amrey inaysan Soomaaliya ku nool Holland Dib ugu celinin Soomaaliya
Dowlada Holland oo lagu Amrey inaysan Soomaaliya ku nool Holland Dib ugu celinin Soomaaliya
Dowlada Holland ayaa lagu amray inaysan dib Soomaalida dalkaasi ku sugan aysan ugu soo celin meel ka mid ah koofurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya oo Muqdisho ay ku jirto ilaa amaanka magaalooyinka dalka Soomaaliya uu ka wanaagsanaanayo.
Hayada qaxootiga qaramada midoobay UNCHR ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dowlada Holland ay qorsheynayso inay dib usoo celiso dad magngalyo ahaan u tagay dalkaasi, laakiin loo baahan yahay inay ka fiirsato celinta Soomaalidaasi.
“Dowlada Holland waa inaysan go’aansan kusoo daabulida dadka Soomaaliyeed ee koofurta iyo bartamaha Soomaaliya ilaa Qaramada Midoobay ay ku wargelinayaan wanaagsanaanta xaalada amaanka,” sidaasi waxaa yiri Gerry Simpson oo ka mid ah madaxda sare ee UNCHR.
“Halka amaanka qeybo kamid ah Muqdisho uu wanaagsan yahay kamadhigna in gobolada dalka aysidaasi oo wali weeraro rayid lala eegta ayaa jira,” ayuu hadalkiisa kusii daray.
Bishii aprill sanadkii 2011 dowlada Hollandayaa sheegtay inay joojisay laabashada dalka Soomaaliyeed oo badankood ka tagayay caasimada Soomaaliya.
Waxaa dowlada lagu eedeeyay inaysan siin adeegyadii ay u baahnaayeen dadka Soomaalida.
Allgedo News, Nairobi/Kenya.